Ndị Kraịst Hà Kwesịrị Ịna-edebe Ụbọchị Izu Ike? | Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Malagasy Malayalam Myanmar Norwegian Nzema Ossetian Polish Portuguese Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tsonga Turkish Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Iwu Ò Ji Ndị Kraịst Idebe Ụbọchị Izu Ike?
A gwaghị Ndị Kraịst ka ha na-edebe ubọchị izu ike. Ndị Kraịst nọ n’okpuru “iwu nke Kraịst.” Idebe Ụbọchị Izu Ike esoghịkwa n’iwu ahụ. (Ndị Galeshia 6:2; Ndị Kọlọsi 2:16, 17) Gịnị mere anyị ji kwuo otú a? Ka anyị burugodị ụzọ hụ otú Ụbọchị Izu Ike si malite.
Gịnị bụ Ụbọchị Izu Ike?
Ebe mbụ okwu a pụtara na Baịbụl bụ n’iwu Chineke nyere ụmụ Izrel. (Ọpụpụ 16:23) Dị ka ihe atụ, iwu nke anọ n’ime Iwu Iri kwuru, sị: “Cheta ụbọchị izu ike ka i doo ya nsọ, ị ga-eji ụbọchị isii jee ozi ma rụọ ọrụ gị niile. Ma ụbọchị nke asaa bụ ụbọchị izu ike nye Jehova bụ́ Chineke gị. Arụla ọrụ ọ bụla.” (Ọpụpụ 20:8-10) Ụbọchị Izu Ike na-amalite mgbe anyanwụ dara na Fraịdee ruo mgbe anyanwụ dara na Satọdee. N’oge ahụ, ndị Izrel anaghị esi n’ụlọ ha pụọ, ha anaghị amụnye ọkụ, kpaa nkụ ma ọ bụ buo ibu. (Ọpụpụ 16:29; 35:3; Ọnụ Ọgụgụ 15:32-36; Jeremaya 17:21) A na-egbukwa onye ọ bụla na-edebeghị Ụbọchị Izu Ike.—Ọpụpụ 31:15.
E nwekwara ụbọchị ndị ọzọ bụ ụbọchị izu ike na Kalenda ndị Juu. A na-ewerekwa afọ nke asaa na afọ nke iri ise ka afọ izu ike. N’afọ izu ike, ndị Izrel anaghị akọ ihe, ha anaghịkwa amanye onye ọ bụla ji ụgwọ ka ọ kwụọ ụgwọ o ji.—Levitikọs 16:29-31; 23:6, 7, 32; 25:4, 11-14; Diuterọnọmi 15:1-3.
Àjà Jizọs chụrụ kagburu iwu Ụbọchị Izu Ike
Gịnị mere na iwu Ụbọchị Izu Ike ejighị Ndị Kraịst?
Ọ bụ naanị ndị e nyere Iwu Mozis ka iwu ji idebe Ụbọchị Izu Ike. (Diuterọnọmi 5:2, 3; Ezikiel 20:10-12) Chineke agwaghị ndị ọzọ ka ha na-edebe ụbọchị izu ike. Ihe ọzọ bụ na mgbe Jizọs Kraịst ji ndụ ya chụọ àjà, ọ tọpụrụ ndị Juu “n’Iwu ahụ,” ma n’Iwu Iri ahụ. (Ndị Rom 7:6, 7; 10:4; Ndị Galeshia 3:24, 25; Ndị Efesọs 2:15) Kama ịna-edebe Iwu Mozis, Ndị Kraịst na-edebe iwu kachanụ, ya bụ, iwu ịhụnanya.—Ndị Rom 13:9, 10; Ndị Hibru 8:13.
Ihe na-abụghị eziokwu ndị mmadụ na-ekwu banyere Ụbọchị Izu Ike
Ụgha: Ọ bụ Chineke malitere Ụbọchị Izu Ike mgbe o zuru ike n’ụbọchị nke asaa.
Eziokwu: Baịbụl sịrị: “Chineke gọziri ụbọchị nke asaa ahụ bịakwa doo ya nsọ, n’ihina ụbọchị ahụ, Chineke zuru ike mgbe ọ rụchara ọrụ okike ya.” (Jenesis 2:3, Baịbụl Nsọ: Nhazi Katọlik) Ihe e kwuru n’amaokwu a bụ ihe Chineke mere n’ụbọchị nke asaa mgbe ọ na-eke ihe, ọ bụghị iwu o nyere ụmụ mmadụ. E nweghị onye Baịbụl kwuru na-edebe ụbọchị izu ike tupu oge Mozis.
Ụgha: Ndị Izrel na-edebebu Ụbọchị Izu Ike tupu e nye ha Iwu Mozis.
Eziokwu: Mozis gwara ndị Izrel, sị: “Anyị na Jehova bụ́ Chineke anyị gbara ndụ na Horeb,” bụ́ nke dị́ n’akụkụ Ugwu Saịnaị. Iwu Ụbọchị Izu Ike so n’ọgbụgba ndụ a. (Diuterọnọmi 5:2, 12) Ihe ndị Izrel mere gosikwara na iwu Ụbọchị Izu Ike bụ iwu ọhụrụ. Chineke gwara ha ka ha na-edebe Ụbọchị Izu Ike n’ihi na ọ ga na-echetara ha otú o si kpọpụta ha n’Ijipt. Ọ bụrụ na ha na-edebebu ya mgbe ha nọ n’Ijipt, olee otú ọ gaara esi na-echetara ha ihe a? (Diuterọnọmi 5:15) Gịnị mere e ji gwawa ha ka ha ghara ịtụtụ mana n’ụbọchị nke asaa? (Ọpụpụ 16:25-30) Gịnịkwa mere na ha amaghị ihe ha ga-eme mgbe mbụ mmadụ dara iwu Ụbọchị Izu Ike?—Ọnụ Ọgụgụ 15:32-36.
Ụgha: Ụbọchị Izu Ike bụ ọgbụgba ndụ ebighị ebi. N’ihi ya, a ka kwesịrị ịna-edebe ya.
Eziokwu: Ụfọdụ nsụgharị Baịbụl kpọrọ Ụbọchị Izu Ike “ọgbụgba ndụ ebighị ebi.” (Ọpụpụ 31:16, Bible Nsọ nke Union Version) Ma, okwu Hibru a sụgharịrị “ebighị ebi” nwekwara ike ịpụta “na-adịru mgbe a na-akaghị aka.” Dị ka ihe atụ, ọ bụ otu okwu ahụ ka Baịbụl ji gosi mgbe ndị nchụàjà Izrel ga-arụru ọrụ ha. Ma, Chineke kwụsịrị ọrụ ahụ kemgbe ihe dị ka puku afọ abụọ gara aga.—Ọpụpụ 40:15; Ndị Hibru 7:11, 12.
Ụgha: Ndị Kraịst kwesịrị ịna-edebe Ụbọchị Izu Ike n’ihi na Jizọs debere ya.
Eziokwu: Mgbe Jizọs nọ n’ụwa, onye ọ bụla bụ́ onye Juu na-edebe iwu Mozis. Ọ bụ ya mere Jizọs ji debe Ụbọchị Izu Ike n’ihi na ọ bụ onye Juu. (Ndị Galeshia 4:4) Mgbe Jizọs nwụrụ, e wepụrụ Iwu Mozis, ma iwu Ụbọchị Izu Ike.—Ndị Kọlọsi 2:13, 14.
Ụgha: Pọl onyeozi debere Ụbọchị Izu Ike mgbe ọ bụ Onye Kraịst.
Eziokwu: Pọl gara n’ụlọ nzukọ n’Ụbọchị Izu Ike, ma ọ bụghị ka o soro ndị Juu mee ihe ha na-eme. (Ọrụ Ndịozi 13:14; 17:1-3; 18:4) Kama, ọ na-ekwusa ozi ọma n’ụlọ nzukọ n’ihi na n’oge ahụ, e nwere ike ịgwa ndị si esi bịa ka ha gwa ndị zukọtaranụ okwu Chineke. (Ọrụ Ndịozi 13:15, 32) Pọl kwusara ozi ọma “kwa ụbọchị,” ọ bụghị naanị n’Ụbọchị Izu Ike.—Ọrụ Ndịozi 17:17.
Ụgha: Ụbọchị Izu Ike Ndị Kraịst bụ ụbọchị Sọnde.
Eziokwu: E nweghị ebe Baịbụl nyere Ndị Kraịst iwu ka ha jiri ụbọchị Sọnde, bụ́ ụbọchị mbụ n’izu, na-ezu ike ma na-efe ofufe. Ndị Kraịst n’oge ochie na-arụ ọrụ n’ụbọchị Sọnde otú ha si arụkwa n’ụbọchị ndị ọzọ. Akwụkwọ bụ́ The International Standard Bible Encyclopedia kwuru, sị: “Ọ bụ n’ihe dị ka otu puku afọ na narị asaa gara aga, mgbe eze ukwu Rom a na-akpọ Constantine, bụ́ onye na-ekpere arụsị, nyere iwu ka a kwụsị ịna-arụ ọrụ ụfọdụ n’ụbọchị Sọnde, ka a malitere ime ụbọchị Sọnde ka ọ̀ bụ ụbọchị izu ike.” *
Oleekwanụ otú anyị kwesịrị isi ghọta amaokwu Baịbụl ndị yiri ka hà na-egosi na ụbọchị Sọnde pụrụ iche? Baịbụl kwuru na Pọl onyeozi na Ndị Kraịst ibe ya rikọrọ nri “n’ụbọchị mbụ n’izu,” ya bụ, n’ụbọchị Sọnde. Ma, o doro anya na ihe mere ha ji zukọta rie nri ahụ bụ na Pọl na-ala n’echi ya. (Ọrụ Ndịozi 20:7) A gwakwara ụfọdụ ọgbakọ ka ha na-ewepụta ego ha ga-enye n’onyinye “kwa ụbọchị mbụ n’izu,” ya bụ, n’ụbọchị Sọnde. Ma, ihe a bụ naanị aro ka a tụụrụ ha. Ọ bụkwa n’ụlọ ha ka ha na-edebe ego ahụ, ha anaghị ewega ya n’ebe ha na-ezukọ.—1 Ndị Kọrịnt 16:1, 2.
Ụgha: Ọ dịghị mma iwepụta otu ụbọchị n’izu iji zuo ike ma fee Chineke.
Eziokwu: Ọ bụ Onye Kraịst ọ bụla ka ọ dị n’aka ikpebi ụbọchị ọ ga-eji mee ihe ọ bụla ọ chọrọ ime.—Ndị Rom 14:5.
^ para. 21 Gụọ akwụkwọ bụ́ New Catholic Encyclopedia, Mbipụta nke Abụọ, Mpịakọta nke 13, peeji nke 608.
Ndịàmà Jehova Hà Bụ Ndị Kraịst?
Biko, legodị ihe ụfọdụ mere anyị ji dị iche na chọọchị ndị na-ekwu na ha bụ Ndị Kraịst.
Onye Kraịst Ò Nwere Ike Ịga Ụlọ Ọgwụ Ma Ọ Bụ Ṅụọ Ọgwụ Ma Ọ Rịawa Ọrịa?
Gịnị Ka Baịbụl Kwuru Banyere Ịmịnye Mmadụ Ọbara n’Ahụ́?
Gịnị Ka Baịbụl Kwuru Gbasara Igbu Egbugbu?